Imicimbi esebenzayo | Eindhoven kunye neAmsterdam | Law & More B.V.
Xa ufaka umthetho wethu ngokuqinileyo ngokuboniswa kwemidla yakho, siya kuyibeka phantsi kwisivumelwano somsebenzi. Esi sivumelwano sichaza imigaqo kunye neemeko esithethe ngazo nawe. Oku kunxulumene nomsebenzi esiya kukwenzela wona, umrhumo wethu, ukubuyiselwa kweendleko kunye nokusetyenziswa kwemigaqo nemiqathango ngokubanzi. Ekwenziweni kwesivumelwano sokwabiwa, imigaqo efanelekileyo, kubandakanya nemithetho ye-Netherlands Bar Association, ithathelwa ingqalelo.
Xa ufaka umthetho wethu ngokuqinileyo ngokuboniswa kwemidla yakho, siya kuyibeka phantsi kwisivumelwano somsebenzi. Esi sivumelwano sichaza imigaqo kunye neemeko esithethe ngazo nawe. Oku kunxulumene nomsebenzi esiya kukwenzela wona, umrhumo wethu, ukubuyiselwa kweendleko kunye nokusetyenziswa kwemigaqo nemiqathango ngokubanzi. Ekwenziweni kwesivumelwano sokwabiwa, imigaqo efanelekileyo, kubandakanya nemithetho ye-Netherlands Bar Association, ithathelwa ingqalelo. Isabelo sakho siyakwenziwa ligqwetha onxibelelana nalo, ngokuqonda ukuba eli gqwetha linokuba neenxalenye zomsebenzi walo phantsi koxanduva lwalo kwaye ligadwe ngomnye wabameli, iingcebiso kwezomthetho okanye abacebisi. Ngokwenza njalo, igqwetha liya kusebenza ngendlela enokulindeleka ligqwetha elifanelekileyo nelifanelekileyo. Ngeli xesha lale nkqubo, igqwetha lakho liya kukugcina unolwazi ngophuhliso, inkqubela phambili kunye notshintsho kwityala lakho. Ngaphandle kokuba kuvunyelwene ngenye indlela, siya kuthi, ngokusemandleni ethu, sinike imbalelwano ukuba idluliselwe kuwe kwifomu yoyilo, kunye nesicelo sokwazisa ukuba uyavumelana nokubhalwe kuyo.
Ukhululekile ukuba uyiphelise ikhontrakthi yesabelo sakho ngaphambi kwexesha. Siza kukuthumela isibhengezo sokugqibela ngokusekelwe kwiiyure ezichithwe. Ukuba umrhumo ogqityiweyo kuvunyelwene ngawo kwaye umsebenzi sele uqalile, lo mali ihlawulisiweyo okanye inxenye yayo, ngelishwa ayizukubuyiselwa.
Ifemu yomthetho e-Eindhoven kwaye Amsterdam
Kuxhomekeke kwisabelo indlela amalungiselelo ezemali aya kwenziwa ngayo. Law & More kulungiselelwe ukuqikelela okanye ukubonisa iindleko ezinxulumene nesabelo kwangaphambi kwexesha. Oku ngamanye amaxesha kunokubangela isivumelwano semali esisigxina. Sithatha imeko yezemali yabathengi bethu kwaye sihlala sizimisele ukucinga kunye nabaxumi bethu. Iindleko zeenkonzo zethu zomthetho ezihlala ixesha elide kwaye ezisekwe kwinqanaba leeyure zibizwa rhoqo. Sinokucela intlawulo kwangaphambili emsebenzini. Oku kukuhlawula iindleko zokuqala. Le ntlawulo kwangaphambili iya kulungiswa kamva. Ukuba inani leeyure ezisebenziweyo lingaphantsi kwenani lokuhlawulwa kwangaphambili, inxenye engasetyenziswanga yokuhlawula kwangaphambili iya kubuyiselwa. Uya kuhlala ufumana inkcazo ecacileyo yeeyure ezichithwe kunye nomsebenzi owenziweyo. Ungasoloko ucela igqwetha lakho ukuba likucacise. Umrhumo weyure ekuvunyelwene ngawo uchazwe kuqinisekiso lwabiwo. Ngaphandle kokuba kuvunyelwene ngenye indlela, izixa ezichaziweyo zikhethekileyo kwi-VAT. Unako kwakhona ukubhatala iindleko ezinje ngemirhumo yerejista yenkundla, umrhumo webheyile, izinto zokuhamba, iindleko zokuhamba nezokuhlala kunye neendleko zokuhambisa. Ezi zinto zibiziweyo-zephulelo-mali ziya kuhlawulelwa kuwe ngokwahlukeneyo. Kwiimeko ezihlala ixesha elingaphezu konyaka, iqondo ekuvunyelwene ngalo linokuhlengahlengiswa minyaka le ngepesenti yesalathiso.
Singathanda ukukucela ukuba uhlawule i-akhawunti yakho yegqwetha kwiintsuku ezili-14 zomhla we-invoice. Ukuba intlawulo ayenzwanga ngexesha, sinelungelo (lethutyana) lokunqumamisa umsebenzi. Ukuba awukwazi ukuhlawula i-invoice ngaphakathi kwexesha elimiselweyo, nceda usazise. Ukuba kukho isizathu esaneleyo soku, amanye amalungiselelo anokwenziwa ngokokubona kwegqwetha. Oku kuya kubhalwa phantsi.
Law & More ayihambelani neBhodi yoNcedo lwezoMthetho. Kungako kunjalo Law & More ayiboneleli ngoncedo lwasemthethweni oluxhasayo. Ukuba ungathanda ukufumana uncedo lwezomthetho oluxhasayo (“ukongeza”), sicebisa ukuba unxibelelane nenye inkampani yomthetho.
Kumsebenzi wethu njengeziko lezomthetho kunye nokubonisana ngerhafu okusekwe eNetherlands, sinyanzelekile ukuba sihambisane nomthetho wokuchasa imali waseDatshi kunye nowaseYurophu (WWFT), ofuna kuthi uxanduva lokufumana ubungqina obucacileyo bokuchazwa komthengi wethu, Ngaphambi kokuba sikwazi ukubonelela ngeenkonzo kwaye siqale ubudlelwane besivumelwano. Ke ngoko, isicatshulwa kwiChamber of Commerce kunye / okanye ukuqinisekiswa kwekopi okanye ubungqina obuqinisekileyo besazisi bunokucelwa kulo mongo. Unokufunda ngakumbi malunga noku Uxanduva lwe-KYC.
Bhalisa i-UBO eNetherlands ngo-2020
Imiyalelo yaseYurophu ifuna amazwe angamalungu ukuba asete irejista ye-UBO. I-UBO imele uMninimzi oLunge kakhulu. Irejista ye-UBO iya kufakwa eNetherlands ngonyaka we-2020. Oku kubandakanya ukuba ukusukela ngo-2020 ukubheka phambili, iinkampani kunye namaqumrhu asemthethweni anyanzelekile ukuba abhalise (abanini-zinkampani) ngokuthe ngqo. Inxalenye yedatha yobuqu ka […]
Ukubuyiselwa komonakalo ongahambelani nezinto ...
Nawuphi na umvuzo wembuyekezo engeyiyo eyokwenyama ebangelwe kukusweleka okanye ngengozi kude kube kutshanje ingagqitywanga ngumthetho woluntu waseDatshi. Lo monakalo ungeyonto ebonakalayo uqulethe usizi lwezalamane ezisondeleyo ezibangelwa sisiganeko sokufa okanye ingozi yothandekayo wabo elinye iqela eliza kuthi […]
Umthetho waseDatshi kukhuseleko lweemfihlo zorhwebo
Oosomashishini abaqesha abasebenzi, bahlala babelana ngolwazi oluyimfihlo kunye naba basebenzi. Oku kunokuchaphazela ulwazi lobuchwephesha, olufana neresiphi okanye ialgorithm, okanye ulwazi olungelulo olwezobuchwephesha, olufana neziseko zabathengi, iindlela zokuthengisa okanye izicwangciso zeshishini. Nangona kunjalo, kuyakwenzeka ntoni kolu lwazi xa umqeshwa wakho eqala ukusebenza kwinkampani ye […]
Imigaqo yethu ngokubanzi kunye neemeko ziyasebenza kwiinkonzo zethu. La magama aqhelekileyo kunye namaikhowudi aya kuthunyelwa kuwe kunye nesivumelwano sokwabiwa. Ungafumana kubo Iimeko Eziqhelekileyo.
Sincamathisela ukubaluleka okukhulu kulwaneliseko lwabathengi bethu. Ifemu yethu iyakwenza konke okusemandleni ukukunika eyona nkonzo inokwenzeka. Ukuba uthe waneliseka yinkalo ethile yeenkonzo zethu, sicela usazise ngokukhawuleza kwaye uxoxe ngalo negqwetha lakho. Ngokudibana nawe, siya kuzama ukufumana isisombululo kwingxaki esele ikho. Siya kuhlala siqinisekisa esi sisombululo kuwe ngokubhala. Kwimeko apho akunakwenzeka ukuba ufike kwisisombululo kunye, iofisi yethu inenkqubo yezikhalazo eofisini. Ungafumana ngaphezulu kwale nkqubo kule Inkqubo yeZikhalazo zeOfisi.
Ngaba uyafuna ukwazi ukuba yintoni Law & More ndingakwenzela njengeziko lezomthetho e-Eindhoven naseAmsterdam?